သငျသညျ remontka.pro ဆိုက်နှင့်အသစ်သောပစ္စည်းများစာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်ငါပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ ငါ, ငါ့ site ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသောကွန်ပျူတာအကြောင်းအရာများ မှလွဲ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းများကြော်ငြာပစ္စည်းများပေးပို့ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ subscription ရွေးချယ်စရာအဆိုပါကြေးနန်း Facebook က YouTube ကိုတွစ်တာ Odnoklassniki Yandeks.Dzen RSS Feed ကိုဆက်သွယ် remontka site ကို E-mail ကိုသတင်းလွှာအသစ်တခါတရံစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများကိုမှတဆင့် Subscribe ။
Windows7ကိုဘို့ msvcp71.dll ဖိုင်
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်ကစားပွဲ (ဥပမာ, Titan Quest), သို့မဟုတ်သင် file ကိုမတွေ့ရှိသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်သတင်းစကားကိုတွေ့မြင်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပါလျှင် msvcp71.dll ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: အားလုံး၏ Windows ကိုပထမဦးစွာအဘို့ကို download msvcr71.dll - သင်အမျိုးမျိုးသော DLL ကိုစာကြည့်တိုက် collection များကိုဆိုဒ်များနှင့်အတူဤဖိုင်မယူသင့်ပါတယ် - သင် msvcp71 ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရင်တောင်ထိုမှတပါး, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်နှင့်နိုင်ပါတယ်။
စနစ်အာဏာမှာထူးဆန်းတဲ့ Beep ပိတ်ဆို့နေစဉ်ကွန်ပျူတာ start ဘဲနေရသနည်း ဒါမှမဟုတ်တင်ဖြစ်ပေါ်ဒါပေမယ့်လည်းထူးဆန်းတဲ့ညှစ်သံမြည်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသလဲ? ကွန်ပျူတာကဤအမှု၌လုံးဝအချက်ပြမှုများပေးခြင်းမဟုတ်, အပေါ်မလှန်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒါမကောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူး, ပိုမိုပြဿနာများ, ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထိုအညှစ်သံမြည်ဆိုပါတယ် - အဲဒါကိုကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာများရှာဖွေရေးမှာသူတို့ကို fix ဖို့ရာသိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူပြဿနာများရှိပြီးသောအရာကိုနှင့်တကွ, အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းအကြောင်းကြားကြောင်း BIOS ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။
Computer ကိုချေးငွေ - ဝယ်ဖို့ရှိမရှိ
သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာကိုဝယ်နိုင်မည့်နီးပါးမည်သည့်စတိုးဆိုင်, ချေးငွေအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း။ အများစုမှာအွန်လိုင်းစတိုးကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းချေးငွေကိုဝယ်ခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့သောဝယ်ယူမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေတော်တော်သွေးဆောင်ကြည့် - သငျဖော်ရွေအသုံးအနှုန်းများအပေါ်တစ်ဦးကဆင်းပေးချေမှုနှင့်ပိုမိုပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲချေးငွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Ubuntu ကို install လုပ်ခြင်း
ရသည်မှာ, သင်က bootable USB flash drive ကိုအသုံးပြုချင်ဖတ်မှုကြောင့်အလွတ် discs တွေကိုသို့မဟုတ် disc ကို drive ကိုတစ်ဦးမရှိခြင်းဥပမာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နှင့်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် Ubuntu ကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ok, သင်တို့ကိုငါကကူညီလိမ့်မယ်။ , BIOS, တစ်စက္ကန့်သို့မဟုတ်အဓိက OS ကိုအဖြစ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် operating system ကို install လုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးကို USB ချောင်းကိုသို့မဟုတ် Laptop ကိုကွန်ပျူတာကနေတပ်ဆင်ခပေါ်မှာ Ubuntu Linux ကို flash drive ကို installation ကို Boot တက်၏ဖန်တီးမှု: ဤလက်စွဲစာအုပ်များတွင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုနိုင်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Windows ကို Windows XP ကို ​​Window7ကို Windows 8 Windows operating system ကို။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းအပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများအဘို့, စစ်ဆင်ရေး, အ Windows operating system အတွက်ပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်။ အသုံးဝင်သောဆောင်းပါးများ, တစ်ဦးကို USB drive ကိုထံမှ installation, အခြေခံအုတ်မြစ်အလုပ် Windows 8 နှင့်အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူကျွမ်း။ ဤအခေတ်သစ်၏ကြီးမြတ်သောအကျိုးခံစားခွင့်, အကျိုးစီးပွားများနှင့်ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါဦးမည်ဖြစ်သော Google က Android ကို operating system ကို run စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များ၏အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုလမ်းညွှန်ချက်များကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လိုအန်းဒရွိုက်4ရက်နေ့ကို Adobe Flash Player ကို install လုပ်နည်း Android ပေါ်မှာသော့ဖွင့်သော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုက Google က Android, စက်ကို။
ဆုံးဘုံပြဿနာများ - အဆက်အသွယ်
ဒီစာမျက်နှာတွင်သင်အများဆုံးမကြာခဏအဆက်အသွယ်အတွက်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအများတွင်ပေါ်ပေါက်သောပြဿနာများအဖြေတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ site ကို, အပေါငျးတို့သ contents တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်သူတို့ရေးထားလျက်ရှိ၏အဖြစ်စာရင်းထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်စာမကျြနှာ VC ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်အသစ်အခွအေနမြေား။ ငါအဆက်အသွယ်ထဲသို့မဝငျနိုငျသညျ - အသုံးပြုသူသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို VC ကိုသို့ log နှင့်စာမျက်နှာသံသယဟက်ကာအဘို့အသော့ခတ်ထားသည်ဟုသတင်းစကားကိုမြင်လို့မရပါဘူးဘယ်မှာအသုံးအများဆုံးအခွအေနေ။
လက်ပ်တော့နှင့်အတူက Wi-Fi ကိုဖြန့်ဝေဖို့ကိုဘယ်လို
20.02.2015 မှာ Windows | အင်တာနက်ကို | Router ကစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုယနေ့သင့်လျော်သောကြိုးမဲ့ adapter နဲ့တစ်ဦးလက်တော့တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေ Wi-Fi ကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုဖြန့်ဝေဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ အဘယ်ကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့မလဲ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပြီး Router ကိုအတူမဝယ်ဘဲ, သူနှင့်အတူအိမ်မှာအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုပါတယ်။
အဘယ်မှာရှိ HDMI VGA adapter (adapter) ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်မကြာသေးမီကအလုပ်အကိုင်အများအတွက်အဓိက tool အဖြစ် Ultrabook တယ်။ ထို့ပြင်များစွာသောများအတွက် HDMI port ကိုတပ်ဆင်ထားသော Ultrabook, ရန် VGA ပရိုဂျက်တာချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဒါနဲ့ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြန်သည်။ HDMI, VGA, ဒါမှမဟုတ် Wi-Fi ကိုကနေတဆင့်သင့် TV ရန်သင့် Laptop ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လို :. ကိုလည်းရှုပါ။
ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု. အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးကို, ငါ့အမြင်တွင်, ပြက်လုံးအကြောင်း - ဒီဆောင်းပါးမှာပါ, ငါ OS ကို install သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်ဆံပါ, အမည်ရလေးနက်တစ်ခုခုလောက်ရဲ့ပါစေဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဘာမှမရေးပါလိမ့်မယ်။ သတိပေးချက်: ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမကွန်ပျူတာသူ့ဟာသူထိခိုက်စေပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပြက်လုံးသားကောင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မပါဘူးဆိုရင်သူက screen ပေါ်မှာရှုမြင်သောအရာကို fix မှ Windows ကို Re-installation သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်, ဒါကြောင့်ပြီးသားမနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစုဆောင်းသို့မဟုတ်မဝယ် - ကပိုကောင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်သနည်း
သငျသညျသစ်တစ်ခုကွန်ပျူတာလိုအပ်သည့်အခါ၎င်း၏ဝယ်ယူဘို့နှစ်ခုအဓိကရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် - အဆင်သင့်လုပ်ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအများစုစုဝေး။ အဲဒီ options တစ်ခုချင်းစီက၎င်း၏မူကွဲရှိပါတယ်ဥပမာ - အဘို့, သင်ဒေသခံကွန်ပျူတာ store မှာကြီးမားတဲ့လက်လီကွင်းဆက်သို့မဟုတ်စနစ်ယူနစ်များအတွက် branded PC ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။
ငါ site ကို remontka.pro သုံးပြီး privacy ကိုမူဝါဒများ https://remontka.pro site ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သင်မေး, သင်အောက်က privacy ကိုမူဝါဒသဘောတူနေကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်အချက်များနှင့်အတူသဘောမတူလျှင်, site ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဆိုပါဒေတာဘေ့စထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ (ထို "မှိန်" အပါအဝင်မည်သည့်အမည်, သုံးနိုင်တယ်) စပမ်းနှင့်သုံးစွဲသူများ၏တရားမဝင်လုပ်ရပ်များဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ဖို့အတွက် site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်များကိုပို့စ်တင်အဖြစ်သူတို့ထံမှတုံ့ပြန်ချက်အခါသင်, အီးမေးလ်လိပ်စာတခု user name ကိုသတ်မှတ်ထားသောနှင့် အသုံးပြုသူရဲ့ IP address ကို။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ဦးအရင်းအမြစ်-intensive အားပိတ်ပြီးမရနိုငျသော application ကို၎င်း, တစ်ချိန်တည်းမှာသောကွန်ပျူတာ၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ထားပြီးလျှင်အထူးသဖြင့်အစီအစဉ်ကို execute မှ Processor ကို cores ၏ဖြန့်ဖြူးအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်လုပ်ဖို့ Kaspersky Anti-Virus ကိုတဦးတည်း Processor ကို core ကိုရွေးချယ်ခြင်း, ငါတို့အနည်းငယ်ကြစေပေမယ့်အတွင်းဂိမ်းနှင့် FPS အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။
Beginners များအတွက် 23.12.2012 | အင်တာနက်ကို | Skype ကိုအဘယျသို့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်? Skype ကို (Skype ကို) သင်ဥပမာ, များစွာသောအမှုအရာလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု - အခမဲ့အခြားတိုင်းပြည်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုမှပြောဆိုပါ။ သင်တို့သည်လည်းသမားရိုးကျတယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုများထက်သိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းစျေးနှုန်းများမှာသာမန်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်နှင့်မိုဘိုင်းမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှ Skype ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒေတာ Recovery ကို
အဆိုပါစာမျက်နှာကို hard disk ထဲကနေဒေတာ, flash drive ကို, မှတ်ဉာဏ်ကတ်များနှင့် Android devices များ remontka.pro site ၏ပွနျလညျထူထောငျအတှကျအပေါငျးတို့သပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ အခမဲ့နှင့်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက် software ကိုပေးဆောင်, ပုံစံချပေး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖိုင်တွေနဲ့အခြားအချက်အလက် restore အချို့အပိုဆောင်းချဉ်းကပ်မှု, ဖျက်မှု, လိုအပ်ပါက, ကျရှုံးခြင်းမောင်းနှစ်ဦးစလုံးဖော်ပြခဲ့သည်။
Android ပေါ်မှာအေအာရ်တီဆေးနှင့် Dalvik - ထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လို သာ. ကောင်း၏ရာအဘယျအက,
မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေ 25.02.2014 Google က update တစ်ခုက Android 4.4 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသစ်တခုလျှောက်လွှာကွပ်မျက်ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ယခု Dalvik Virtual Machine ကိုအပြင်၌, Snapdragon ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူခေတ်မီစက်ကိရိယာများပေါ်တွင်အေအာရ်တီဆေးပတ်ဝန်းကျင်ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ (သင်က Android ပေါ်မှာအေအာရ်တီဆေးကို enable ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့အမြင်နှင့်အတူဤဆောင်းပါးတယ်လျှင်, သတင်းအချက်အလက်အဲဒီမှာပေးထား, အဆုံးဖို့ကတောက်ပါ) ။
ရုရှားအမေဇုံပေးပို့ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံကို
တစ်ပါတ်အကြာအကြောင်းကဒီမှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိနဲ့ Amazon ရုရှားတွင်အီလက်ထရွန်းနစ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှိကြောင်းသတင်းအဲဒီမှာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဲ့အဘယ်အရာကိုမမြင်နိုင် - ငါစဉ်းစားမိတယ်။ ကြောင်းမတိုင်မီကငါတရုတ်နှင့်ရုရှားကအင်တာနက်စတိုးဆိုင်ထဲကနေအမှုအရာအမိန့်ရတယ်, ဒါပေမယ့်အမေဇုံနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မလိုပါ။
အတန်းဖော် - ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်နှင့်အခြားညွှန်ကြားချက်
ဒီစာမျက်နှာတွင်သင်သည် social networking site အတန်းဖော်နှင့်အတူပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကအသုံးအများဆုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ဥပမာများအတွက်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူ, စကားဝှက်တစ်ခုအပြောင်းအလဲအတွက်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်ကိုအခြေခံလုပ်ငန်းများ။ သငျသညျမွနျမွနျစာမကျြနှာမှအဝင်ဝမှာသူမသံသယဟက်ကာအဘို့အသော့ခတ်ထားပြီးရေးသားခဲ့သည်အခါ, သင်ပရိုဖိုင်းကို activation များအတွက်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်တိုတောင်းတဲ့အရေအတွက်တစ်ခုကို SMS ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်အခြေအနေဆိုးအားပြုပြင်ရန်ပေးနိုင်ပါတယ်သောရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက် - အတန်းဖော်ဖွင့်လှစ်မရနိုငျပါလျှင်အဘယျသို့။
အလွန်ဆူညံကွန်ပျူတာ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ဤဆောင်းပါး၌, ပောက်သံသို့မဟုတ်လမ်းပေါ်မှာရဲ့လေဟာနယ်သန့်စင်ကဲ့သို့သင်၏ကွန်ပျူတာ desktop နဲ့ Buzz ဆူညံသံလျှင်ဘာလုပ်အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ငါတစ်ခုတည်းအမှတ်ကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ - ဖုန်မှုန့်ကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပျော်စေသူကကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း: မှာလည်းအဘယ်ကြောင့် hard drive ကို crack နဲ့ဘယ်မှာသတ္တုလှည်းသံကိုမှလာနိုငျသညျ, ပန်ကာ bearing လူးဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို။
ဖိုင် d3dcompiler_43.dll နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မျိုးကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
သငျသညျ Battlefield တူသောဂိမ်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ် Watch Dogs ကို, d3dcompiler_43.dll file ကိုကွန်ပျူတာပေါ်ပျောက်နေကတည်းကအစီအစဉ်၏ပစ်လွှတ်, မဖြစ်နိုင်ပါသောအချက်ကိုလည်းမရှိဖျောပွ error message ကိုလျှင်, ဤသင်ခန်းစာအတွက်ငါကိုယ်ကဒီဖိုင်ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည် သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရန်နှင့်တပ်ဆင်နှင့် file ကိုဘယ်လို (ဒီနှင့်အတူတကယ်တော့၌၎င်း, အမှားအမှားပြင်ဆင်မှုကိုစတင်သင့်ပါတယ်) ။